Da'yarka Ay U Waalanayaan Man United, Chelsea Iyo Liverpool Ee Jadon Sancho Oo Keydka Fadhiya Kulanka Galabta Ee Dortmund & Sababta Oo La Sharaxay - Gool24.Net
Da’yarka Ay U Waalanayaan Man United, Chelsea Iyo Liverpool Ee Jadon Sancho Oo Keydka Fadhiya Kulanka Galabta Ee Dortmund & Sababta Oo La Sharaxay
Horyaalka ugu xiisaha badan dalka Germany ee Bundesliga ayaa noqday tartankii ugu horreeyay ee weyn ee soo laabtay kaddib mudo laba toddobaad ah oo ay kubadda cagtu u istaagtay sababta xanuunka dunida ku dilaacay ee Korona.
Kulanka ugu horreeya ee lagu furay soo laabashada tartankaas ayaa ah midka xiisaha badan ee Derby-ga ah ee dhex maraya kooxaha Borussia Dortmund iyo Schalke 04.
Kulankan oo ay labada kooxood shaaciyeen shaxaha ay ku ciyaarayaan ayaa shaxda Borussia laga waayay 20 sano jirka muhiimka u ah kooxdaas ee Jadon Sancho oo la sheegay inuu sabab dhaawac ku maqan yahay.
Sancho ayaa kulanka kusoo bilawday kursiga keydka, kahor inta aan shaxaha la shaacin ayuu wargeyska The Athletic sii xusay in Sancho uu qabo dhaawac kubka ah.
Dabcan balaayiin ku kala dhaqan dunida dacaladeeda ayaa soo dhawaynaya galabta soo laabashada kubadda cagta laakiin dadka ree England ayaan kamid ahayn maadaama da’yarka dalkooda ahna mid kamida xiddigaha laga doonayo Premier League uu keydka ku bilawday.
Sancho ayaa ku raaxaysanaya xilli ciyaareedkiisii ugu wacnaa ilaa hadda waayihiisa ciyaareed kaddib markii uu soo dhaliyay 14 gool 16 kalena caawiye kasoo ahaa 23 kulan oo uu kasoo ciyaaray horyaalka La Liga.
Kaliya Ciro Immobile oo 27 gool iyo 7 caawimo soo sameeyay iyo Lionel Messi oo soo diiwaan gashaday 19 gool iyo 12 caawimo ayaa ah labada ciyaartoy ee kaliya ee shanta horyaal ee Yurub ugu waaweyn kaga badan ka qayb qaadashada goolasha.